Top 10 Codsiyada lagula socdo Free 3D
Dhammaan Solutions in Play / Edit / Beddelaan 3D Videos
Ma waxaad doonaysaa ugu wanaagsan 3D free video ciyaartoyda? Ama, doonayaa xirfadle laakiin fududahay in la isticmaalo barnaamijka si ay u sameeyaan filimada 3D? Ama waxaad u baahan tahay oo kaliya qaar ka mid ah talooyin ay u badalaan filimada 3D aad? Hubi zone this, waxaad ka heli doontaa dhammaan xal u ciyaaro iyo edit 3D videos.
1.1 Shabakadaha Si Rent Videos 3D
2 3D Video Kan sameeyey,
2.1 Free 3D Rinjiga Video
2.2 Codsiyada Free 3D lagula socdo
3.1 3D Video Players u PC
3.2 Play Videos 3D
3.3 Play 3D Movies Iyadoo Vlc
3.4 3D Video Kaameerada
4.2 lagu bedelan karo Xilisoft 3D Video Converter
5 2D in 3D
5.1 2D Si 3D MKV Converter
5.2 2D Si 3D MP4 Converter
6.1 3D Movies Download Free Wixii TV 3D
6.2 Movies 3D On Netflix
6.3 Movies New 3D In 2014
6.4 YouTube 3D Videos For Kids
6.5 Songs 3D Video
Saddex geesood ah (3D) naqshadeynta computer hadda la isticmaalo, ha noqoto filimada, naqshado alaabta, xayaysiisyada, iwm Inkasta oo ay caadi ahaan arkay, in macnaheedu ma aha, waxay si sahal ah ayaa loo abuuray. Si aad u caawiso galay Tusaale 3D ee 2014, waxaan abuuray liiskan oo ka mid ah 10ka codsiyada Tusaale 3D lacag la'aan ah.
Tani barnaamij lagula socdo 3D lacag la'aan ah waxaa la sameeyey ka xoq isagoo qasdigiisu yahay la il. Waxaa aad boosaska badan oo loo isticmaali karaa shaqooyin badan oo kala duwan sida texturing, isdabamarinta, dhiirogelin, iyo haya'ad. Ugu qiimaha grand eber, taas waa barnaamij weyn oo aadan rabin in ay ka maqnaan.
Baro wax badan oo ku saabsan Qase >>
Google Sketchup waa software cajiib ah dhowr sababood. Tan koowaad waa in ay tahay si fudud in ay isticmaalaan in xitaa caruurta yar yar u isticmaali kartaa. Marka labaad, waxa uu leeyahay awood u leh inay kor u qaaddo in adayga mashaariicda cajiib yar oo jidka oo dhan waxaa kor qasba physics waaweyn. Natiijada All sidoo kale la dhoofin karo sida videos, sawirada, iyo aragtida.
Baro wax badan oo ku saabsan Google Sketchup >>
3. AutoQ3D Community
AutoQ3D Community waa barnaamij weyn u ogolaanaya tafatirka fudud iyo isticmaalka buuxda ee kaarka naqshadeynta aad PC ee. Waxay leedahay interface ah si yaab leh dareen leh oo waxaa la siiyaa lacag la'aan ah in ay dadweynaha ku hoos liisan dadweynaha GNU, Waxaa ugu horayn loo isticmaalo wadanay naqshado 3D iyo tijaabinta ay suurtogal.
Baro wax badan oo ku saabsan AutoQ3D Community >>
4. 3D mataleysay
3D mataleysay waa goosin ka mid ah software in kuu ogolaanayaa artist ah si ay u isticmaalaan-waqtiga dhabta ah lagula socdo 3D iyo faa'iideysan nidaam jiitaa-iyo-dhibic model dhismaha. Tani waa hab aad uga fudud in la sameeyo daydo badan barnaamijyada kale ee lagula socdo iyo ogolaan karaa hab fudud oo degdeg rikoor waqti si ay u dhisaan wax.
Baro wax badan oo ku saabsan 3D mataleysay >>
5. Design Lite
DesignWorkshop Lite waa barnaamij ku dayasho wanaagsan 3D oo tayo leh oo raad in guud ahaan la xiriira dhismayaasha iyo mashaariicda dhismaha. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijkan ayaa qadar badan oo dabacsanaan iyo waxaa loo isticmaali karaa muddo ku dhow wax walba oo ka hawlgasha 3D. Tiro yar barnaamijyada kale ee design yihiin sida wanaagsan ee dabacsanaan guud.
Baro wax badan oo ku saabsan DesignWorkshop Lite >>
6. K3D isticmaalaysa
K3D isticmaalaysa waa barnaamij visualizes oo isticmaalaysa daydo xisaabta ee dhinacyada badan ka baxsan saddex fudud. Isleegyo parametric adag oo ISO-oogada ayaa sidoo kale loo ogol yahay iyo in la xisaabiyaa karaa gudahood software ah. Tani waxay la mid ma u baahan tahay xirfad kasta u gaar ah sidii loo deeruhu inta badan kaliya ee xogta iyo arkaya sida ay u soo jiidaa.
Baro wax badan oo ku saabsan K3D isticmaalaysa >>
Bishop3D waa barnaamij lagula socdo in uu yahay mid aad u jecel yahay oo dadka isticmaala ay abuuraan images aadka u macquul ah oo lagu daydo 3D si fudud kuu ogolaanaysaa ah. Muuqaallo lagu qaabeeyey karaa hab is-dhexgal iyo isticmaali qabnay in iyaga animates. Editor texture ayaa sidoo kale waa u fiican iyo sidoo ay sabab u tahay kala duwan oo badan oo la heli karo si faahfaahsan.
Baro wax badan oo ku saabsan Bishop3D >>
FreeCad waa gabal software iyada oo heerka hoose shaqeynta ka badan kuwa kale qaar ka mid ah halkan ku qoran ah. Si kastaba ha ahaatee, waa wax aad u fiican oo kuwa in yar laga bilaabo iyo sidoo kale kuwa doonaya in ay dardar mooshin. Dhaqaaqu lagu duubay saxsanaan weyn oo waxaa loo isticmaalaa aqoonyahannada si ay go'aan uga jawaabo sayniska.
Baro wax badan oo ku saabsan FreeCad >>
3DPlus u ogolaanaya guud ee bilowga ah si aad u hesho ciyaarta Tusaale 3D aan waayo-aragnimo wax kasta oo ka hor la sireed. Tani waa fiican ee carruurta yar yar ama kuwa runta ah waa bilowga ah iyo si fudud u lahayn fikrad waxay sameynayaan oo ay la mashruuc weli. Dad badan oo ka faa'iideysan karaa sida gargaarka tacliimeed iyo sidoo.
Badan oo ku saabsan 3DPlus Baro >>
Anim8or waa gabal cajiib ah oo software in takhasusay jidaynayey peopel in ay isticmaalaan si ay u dhisaan daydo in ay isticmaalaan qaabab kala soo doonteen sida dhululubada. More muuqaalo adag lagu samayn karo in muddo hal mar qaababka lagu aasaasay. Qofka ka adag doonayo ay model u noqon, xaddiga weyn ee muuqaalo ku noqon doontaa inay.
Baro wax badan oo ku saabsan Anim8or >>
Top 5 Best Free Wmv Video Joiners
Top 6 Transfer Phone Apps si ay u gudbiyaan Data muuqan
iPhone: Sida loo dayactir Screen White of Death
Top 5 Apple TV Troubleshootings inay Xalliyaan Arrimaha Common
Top 5 Camera u iPad Apps
10 Best Free Video Apps u Instagram
Top 25 Spotify Apps in Download Now
Sida loo rakib Apps on Nexus 7 ka PC
> Resource > Apps > Top 10 Codsiyada lagula socdo Free 3D